BLACKPINK က Lisa ကို အတုခိုးတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အပြင် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းတွေဆဲဆိုနေသူအကြောင်း ထုတ်ပြောလာခဲ့တဲ့ Dee - Cele Connections
The Model Academy 2019 ရဲ့ 1st Runner Up ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dee ကတော့ အမိုက်စားရုပ်ရည်နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Dee က အခုဆိုရင် သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာလမ်းပေါ်ကို လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်ပြီး အောင်မြင်စပြုနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ Dee က ကိုရီးယား K Pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BLACKPINK က Lisa ကို အတုခိုးပြီး လိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး တစ်ဖက်သတ်ပြောဆိုမှုတွေအပေါ် အခုလိုပဲ ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။
“ပုံမှန်တိုင်းဆို ဒီးဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှမပြော ဘာမှ တုန့်ပြန်ပြီးမရေးတတ်ပါဘူး အခုဟာက အရမ်းလွန်လာကြလို့ ရော ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်လာတွေရှိလာတော့ နည်းနည်းလေးပြောပါရစေ။ ဒီးကိုဒီး Lisa နဲ့တူတယ်လို့ တစ်ခါမှ မပြောဖူးပါဘူး။ ဂုဏ်လဲမဆာဖူးပါဘူး။ ဘာလို့လာလာဆဲပီး ပြောနေကြမှန်းစဉ်းစားလို့မရဘူး။ အရမ်းကြိုက်ပါတယ် blackpink ကို YG Stan ပါ YG ကထွက်တာမှန်သမျှအကုန်ကြိုက်ပါတယ်။ lisa နဲ့တူတယ်လို့ ပြောရင် ကိုယ့်လည်းကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ အရင်ကပျော်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းဒါကြီးက ဒီးကိုပိုပြီး စိတ်ထိခိုက်ရသလိုကြီးဖြစ်လာတယ် စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်တယ်။ ”
“အခု ဒီ ss မှာဆို ဒီးက အတုခိုးပီး ဆံပင်လိုက်ဆိုးထားတယ်ပြောပါတယ်။ ဒီးဆိုးထားတာ ပြီးခဲ့တဲ့မွေးလAugust ကထဲက မွေးနေ့မတိုင်ခင်ဆိုးထားတာပါ။ the album က october မှာ ထွက်တာပါ။ အချိန်နဲ့ပုံတွေပါ တင်ပေးထားတယ်။ ခုတူတယ်လို့လာပြောကြရင် ကြောက်ပါတယ် အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီလိုရိုင်းစိုင်းတဲ့လူတွေကြောင့်ပါ။ ပြီးတော့ဆံပင်ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ရတာကိုကြိုက်တဲ့လူပါ။ hair bang လည်း အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ ဘာလုပ်လုပ်တိုက်ခိုက်ဆဲနေကြတွေ တကယ်အဆင်မပြေပါဘူး။ လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးလား? P.s နာမည်နဲ့profile ဖျက်ထားပေးတယ်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။
Dee ကတော့ သူမရဲ့ မျက်နှာကျပုံစံက BLACKPINK က Lisa နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေတာကြောင့် တူတယ်ဆိုပြီးပြောသူတွေရှိသလို အခုလို ဝေဖန်ဆဲဆိုသူတွေလည်းရှိကြောင်း ပြသလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Dee’s fb
BLACKPINK က Lisa ကို အတုခိုးတယျဆိုပွီးပွောတဲ့အပွငျ မိုကျမိုကျရိုငျးရိုငျးတှဆေဲဆိုနသေူအကွောငျး ထုတျပွောလာခဲ့တဲ့ Dee
The Model Academy 2019 ရဲ့ 1st Runner Up ဆုရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Dee ကတော့ အမိုကျစားရုပျရညျနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ Dee က အခုဆိုရငျ သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာလမျးပျေါကို လြှောကျလှမျးနပွေီဖွဈပွီး အောငျမွငျစပွုနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ Dee က ကိုရီးယား K Pop အဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈတဲ့ BLACKPINK က Lisa ကို အတုခိုးပွီး လိုကျလုပျနတေယျဆိုပွီး တဈဖကျသတျပွောဆိုမှုတှအေပျေါ အခုလိုပဲ ရငျဖှငျ့လာခဲ့ပါတယျ။
“ပုံမှနျတိုငျးဆို ဒီးဘယျသူ့ကိုမှ ဘာမှမပွော ဘာမှ တုနျ့ပွနျပွီးမရေးတတျပါဘူး အခုဟာက အရမျးလှနျလာကွလို့ ရော ရညျရှယျခကျြရှိရှိတိုကျခိုကျလာတှရှေိလာတော့ နညျးနညျးလေးပွောပါရစေ။ ဒီးကိုဒီး Lisa နဲ့တူတယျလို့ တဈခါမှ မပွောဖူးပါဘူး။ ဂုဏျလဲမဆာဖူးပါဘူး။ ဘာလို့လာလာဆဲပီး ပွောနကွေမှနျးစဉျးစားလို့မရဘူး။ အရမျးကွိုကျပါတယျ blackpink ကို YG Stan ပါ YG ကထှကျတာမှနျသမြှအကုနျကွိုကျပါတယျ။ lisa နဲ့တူတယျလို့ ပွောရငျ ကိုယျ့လညျးကွိုကျတဲ့သူဆိုတော့ အရငျကပြျောပမေဲ့ နောကျပိုငျးဒါကွီးက ဒီးကိုပိုပွီး စိတျထိခိုကျရသလိုကွီးဖွဈလာတယျ စိတျမကောငျးလညျးဖွဈတယျ။ ”
“အခု ဒီ ss မှာဆို ဒီးက အတုခိုးပီး ဆံပငျလိုကျဆိုးထားတယျပွောပါတယျ။ ဒီးဆိုးထားတာ ပွီးခဲ့တဲ့မှေးလAugust ကထဲက မှေးနမေ့တိုငျခငျဆိုးထားတာပါ။ the album က october မှာ ထှကျတာပါ။ အခြိနျနဲ့ပုံတှပေါ တငျပေးထားတယျ။ ခုတူတယျလို့လာပွောကွရငျ ကွောကျပါတယျ အဆငျမပွပေါဘူး။ ဒီလိုရိုငျးစိုငျးတဲ့လူတှကွေောငျ့ပါ။ ပွီးတော့ဆံပငျပုံစံမြိုးစုံလုပျရတာကိုကွိုကျတဲ့လူပါ။ hair bang လညျး အရမျးကွိုကျပါတယျ။ အခုတော့ ဘာလုပျလုပျတိုကျခိုကျဆဲနကွေတှေ တကယျအဆငျမပွပေါဘူး။ လုပျခှငျ့မရှိတော့ဘူးလား? P.s နာမညျနဲ့profile ဖကျြထားပေးတယျ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောလာပါတယျ။
Dee ကတော့ သူမရဲ့ မကျြနှာကပြုံစံက BLACKPINK က Lisa နဲ့ ခပျဆငျဆငျဖွဈနတောကွောငျ့ တူတယျဆိုပွီးပွောသူတှရှေိသလို အခုလို ဝဖေနျဆဲဆိုသူတှလေညျးရှိကွောငျး ပွသလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။